१ डेटि app अनुप्रयोग
२०२१ मा १ Best उत्तम डेटि S साइटहरू र अनुप्रयोगहरू: शीर्ष अनलाइन डेटि Pla प्लेटफर्महरूको प्रकार द्वारा सूची
डेटि sites साइटहरू र अनुप्रयोगहरू आजकल धेरै छन् र कसैलाई उनीहरूको मनपर्ने साइटको बारेमा सोध्नु भनेको व्यक्ति जस्तो व्यक्तिगत रूपमा अद्वितीय जस्तो प्रतिक्रियालाई हटाउँदछ।
जबकि केही व्यक्ति प्रेम र विवाहको लागि खोजी गर्दैछन्, अन्यले केहि बढी आकस्मिकको लागि खोजी गरिरहेको हुन सक्छ।
उत्तम डेटि sites साइटहरूले विविध सुविधाहरूमध्ये धेरै विविधता र गोपनीयता प्रदान गर्दछ। यो लेखको उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिको अद्वितीय स्थिति र सम्बन्ध लक्ष्यहरूको लागि उत्तम डेटि site साइट राख्नु हो।
गम्भीर सम्बन्धका लागि उत्तम - भावना
कार्यरत पेशेवरहरूका लागि उत्तम - एलिटसिंगल्स
सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क डेटि site साइट - Okcupid
उत्तम अनौपचारिक डेटि site साइट - एडल्टफ्रेंडफाइन्डर
सबैभन्दा ठूलो डेटि app अनुप्रयोग - टिन्डर
सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ डेटि site साइट - सिल्वरसिing्गल्स
उत्तम व्यक्तित्व मिलान प्रणाली - हिज
क्रिश्चियन एकलका लागि सर्वश्रेष्ठ - क्रिश्चियनमिंगल
उत्तम विवाहित डेटि site साइट - एशलेमेडिसन
महिलाका लागि उत्तम डेटि app अनुप्रयोग - बम्बल
पुरुषहरू भन्दा बढी महिला - खोजी गर्दै
30 भन्दा कम उमेरका लागि गम्भीर डेटि site साइट - Zoosk
कसरी सर्वश्रेष्ठ डेटिites साइटहरू मूल्याre्कन गरियो:
प्रयोगकर्ता समीक्षाहरू - प्रत्येक डेटि For साइटका लागि हामीले अनुप्रयोगको स्टोर समीक्षा, फोरम छलफल, र ट्रस्टपिलट समीक्षालाई हेराइएका श्रेणीमा उच्चतम औसत रेटिंगका साथ साइटहरू फेला पार्‍यौं।
गोपनीयता र सुरक्षा - सबैले अनलाइन मिति ख्याति वा खतरनाक गएको डरलाग्दो कथाहरू सुनेका छन्। उत्तम डेटि sites साइटहरू अन्तर्निहित गोपनीयता सुविधाहरू र मध्यस्थकर्ताहरूले पनि चरणमा राख्नको लागि जब प्रयोगकर्ता लाइन बाहिर छ वा अन्यलाई जोखिम उठाउँदछ।
अनन्य सुविधाहरू - केहि डेटि websites वेबसाइटहरूले केवल सीधा मिल्दो अप विकल्पहरू प्रस्ताव गर्छन्, च्याट वा भिडियो कल मार्फत। अरूले व्यक्तिहरूलाई मिल्दो खेलहरू, फिल्टरि options विकल्पहरू, र अधिकको साथ तिनीहरूको खेल फेला पार्न मद्दत गर्छन्। यी थप सुविधाहरूले सफलतामा राम्रो अवसरलाई स indicate्केत गर्दछ।
२०२१ को लागि १ Best उत्कृष्ट डेटि S साइटहरू
१. भावना - गम्भीर सम्बन्धका लागि उत्तम
लाखौं दम्पतीहरू एहार्मोनिद्वारा जोडिएका छन् - वास्तवमा, +००++ प्रयोगकर्ताहरू हरेक दिन वेबसाइटमा भेट्ने कसैलाई विवाह गर्छन्। प्लेटफर्मले स्थायी सम्बन्ध खोज्नको लागि उत्तम साइटको रूपमा पुरस्कार पनि जित्यो।
एहार्मोनीले प्रयोगकर्ताहरूलाई साइनअपमा लामो सर्वेक्षण पूरा गर्न आवश्यक हुन्छ, जुन एक "अनुकूलता मिल्दो प्रणाली" को रूपमा कार्य गर्दछ। साइटले त्यसपछि यो जानकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ सफल डेटि choices विकल्पको साथ प्रयोगकर्ताहरू प्रस्तुत गर्न।
यो डाटा-संचालित, छनौट पद्धति नै कारण हो किन कि एरहार्मनी सबैको लागि एक दीर्घकालीन सम्बन्धको खोजीमा उत्कृष्ट विकल्प हो।
२. एलिट एकल - काम गर्ने पेशेवरहरूको लागि उत्तम
एलिट एकलको सदस्यता अत्यधिक योग्य छ, यसलाई उत्तम विकल्प बनाउने यदि प्रयोगकर्ता उत्तेजित कुराकानीको लागि खोजी गर्दैछन्। करिब 85 85 प्रतिशत सहभागीहरूले उच्च शिक्षा डिग्री पाएका छन्, र 90 ० प्रतिशत 30० बर्ष भन्दा माथिका छन्। यी तथ्या्कहरूले जीवन अनुभव डेटिation समीकरणमा बढावा दिन्छन्।
साइटले प्रयोगकर्ताहरूलाई अन्य एकलहरूको साथ एक प्रश्नावलीमा उनीहरूको प्रतिक्रियाहरूमा केन्द्रित एल्गोरिथ्मको प्रयोग गर्दछ। व्यक्तिहरूले यसलाई मुख्य रूपमा दीर्घकालीन साझेदारीको लागि प्रयोग गर्दछन्, दुवै घरेलू र विदेशमा। यो हाल २ 25 राष्ट्रहरूमा सक्रिय छ।
Ad . AdultFenderFinder - hookups को लागी उत्तम
यो साइट दीर्घ-अवधि सम्बन्धहरू खोज्ने कसैको लागि लक्षित छैन। यसले दुई प्राथमिक विकल्पहरू प्रदान गर्दछ: छेउछाउ (अनुप्रयोगमा) वा हुक अप। त्यो यो हो, र केहि व्यक्तिको लागि, उनीहरू चाहिने कुरा यही हो।
एएफएफ, वा वयस्क मित्र खोजकर्ता, संचार विकल्पको एक दायरा, मेसेजिंग, भिडियो ("अनलाइन मिति"), प्रत्यक्ष फीडहरू, र समुदाय कुराकानी सहित।
यस अनुप्रयोगको साथ दर्ता गर्न सजिलो छ। अन्य डेटि sites साइटहरू जस्तो कि एक प्रश्नावली आवश्यक पर्दैन, एएफएफले यसलाई -०-सेकेन्डको साइन अप प्रक्रियामा राख्दछ। प्रयोगकर्ताहरूले तत्काल खोजी सुरु गर्न सक्दछन्।
Silver . सिल्वरसिingल्स - एकलका लागि 50० बर्ष भन्दा बढि
सिल्वरसिing्गलहरू १ 17 बर्षको लागि रहेको छ र 50० बर्ष भन्दा माथिका लागि सबै भन्दा पुरानो डेटि of अनुप्रयोग मध्ये एक हो। सेवा आफैंले प्रत्येक प्रोफाइल प्रमाणित गर्दछ, आफ्ना ग्राहकहरू वास्तविक र सुरक्षित छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गरेर।
प्रयोगकर्ताहरूले विस्तृत व्यक्तित्व प्रश्नावली भर्दछन् जसले उनीहरूको जीवन योजनाहरू, प्राथमिकताहरू, दृष्टिकोण, र अन्य विवरणहरू समावेश गर्दछ, ताकि वेबसाइट उपयुक्त मेलहरू फिल्टर गर्न सक्दछ।
प्लेटफर्म वेबसाइट वा मोबाइल अनुप्रयोग मार्फत पहुँच गरिन्छ जहाँ आधारभूत सदस्यता नि: शुल्क हुन्छ।
B. Bumble - महिलाको लागि उत्तम विकल्प
डम्पिंग एप्लिकेसनहरू बीच ब्म्बल असामान्य छ जुन यसले महिलालाई सञ्चार सुरू गर्न शक्ति प्रदान गर्दछ। पुरुषले उनीहरूको महिला मिलानलाई सम्पर्क गर्न सक्दैन जब सम्म महिलाले सम्पर्कलाई प्राथमिकता गर्दैन। यसले महिलाहरूलाई एक पटकको लागि नेतृत्व लिन अनुमति दिन्छ।
प्लेटफर्मले तत्काल सम्पर्कमा केन्द्रित गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरूसँग सम्पर्क गर्न २ 24 घण्टा हुन्छ, र त्यस पछि, म्याच समाप्त हुन्छ। यसले संकेत गर्दछ कि साइट सहज hookups तिर गियर गरीएको छ, तर यो ती वरिपरि ब्राउजिंग धेरै समय खर्च गर्न मन पराउँदैन भनेर पनि उपयुक्त छ।
यो अनुप्रयोग फेसबुक, स्पोटिफाई, र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको साथ एकरूपतामा एकीकृत गर्दछ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तिनीहरूको व्यक्तित्वका विभिन्न पक्षहरू प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ। नक्कली प्रोफाइलहरू प्राय: पप अप गर्नबाट जोगिन खाताहरूलाई पनि प्रमाणित गरिन्छ।
H. हिंग - अभिनव डेटि app अनुप्रयोग
कम्पनीले २०१ 2016 मा हाइजलाई पुन: सुरुवात गर्‍यो, र यो हालका वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै छलफल हुने डेटि apps अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो, सम्भवतः यसको प्रयोगकर्ताहरूको सफलता दरहरूको कारण। लगभग in 75 प्रतिशत हिंग प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो खेलहरू भेट गरे पछि दोस्रो मितिमा जान रोज्छन्।
हिन्ज प्रोफाइल भएका व्यक्तिले समीक्षा पनि छोड्न सक्छन्, जुन हिन्ज सफ्टवेयरले भविष्यमा उनीहरूको मिलान एल्गोरिदमलाई परिष्कृत गर्न मद्दत गर्दछ।
हिंगको प्लेटफर्म रमाईलो छ कि यसले प्रयोगकर्तालाई अर्को व्यक्तिको प्रोफाइलको कुनै अंशमा मनपराउन वा टिप्पणी गर्न प्रोम्प्ट गर्दछ। यसले व्यक्तिलाई सामान्य कुराकानी पछाडि अन्तर्क्रियाको लागि मार्ग प्रदान गर्दछ।
See . खोजी - चिनी ड्याडी र चिनी बच्चाहरूको लागि
खोज अद्वितीय छ किनकि यसले युवा व्यक्तिहरू (चिनी शिशुहरू) लाई बृद्ध, धनी चिनी ड्याडीजसँग जोड्ने कुरामा केन्द्रित गर्दछ। स्पष्ट रूपमा, यो प्राय जसो विश्वास गर्ने भन्दा बढी सामान्य हो, यस प्लेटफर्ममा अब १० करोड भन्दा बढी सदस्यहरू छन्। प्रत्येक व्यक्तिले जडान गर्नु अघि उसको शर्तहरू निर्दिष्ट गर्न सक्दछ, चाहे तिनीहरू यात्रा गर्न चाहन्छन्, भत्ता माग्न वा अन्य विनिर्देशहरू।
त्यहाँ एक उच्च महिला-देखि-पुरुष अनुपात छ, जसको मतलब ड्याडीसँग छनौट गर्न धेरै विकल्पहरू छन्, यद्यपि यसले यो पनि दर्साउँछ कि बच्चा प्रतिस्पर्धा भयंकर हुन सक्छ।
9 JDate - यहूदी एकल मात्र
JDate यहूदी एकलका लागि मात्र डेटि service सेवा हो। यो १ 1997 1997 in मा स्थापना भएको हो र अब १०० भन्दा बढी देशहरूमा पहुँचयोग्य छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई पाँचवटा विभिन्न भाषाहरू (अंग्रेजी, हिब्रू, फ्रान्सेली, जर्मन, र स्पेनिश) मा यहूदी एकलसँग कुराकानी गर्न अनुमति दिन्छ।
जब अनलाइन यहूदी विवाहहरूको कुरा आउँछ, JDate ती जोडीहरूको percent० प्रतिशत भन्दा बढी मिलानको लागि जिम्मेवार छ।
प्रयोगकर्ताहरूले नि: शुल्क वा भुक्तान सदस्यताका साथ जो कोहीसँग सम्पर्क गर्न सक्दछन्। ग्राहक सेवाले प्रत्येक प्रोफाइलको जाँच गर्छ कि यो निश्चित ग्राहकहरूद्वारा सिर्जना गरिएको हो।
१०. क्रिश्चियनमिंगल - सर्वश्रेष्ठ क्रिश्चियन डेटि। साइट
क्रिश्चियनमिंगलले क्रिश्चियन समुदायमा रहेका प्रयोगकर्ताहरूलाई सदाको लागि प्रेम पाउन मद्दत गर्दछ। यो १ लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूलाई समाहित गर्दछ, र साइट स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन क्षमता को लागी "विश्वास आधारित डेटि” "लाई प्रोत्साहित गर्दछ।
त्यहाँ एक नि: शुल्क खाता विकल्प वा monthly २। .95। को लागि मासिक सदस्यता छ। पछिल्लो ग्यारेन्टीको साथ आउँदछ, जहाँ प्रयोगकर्ताले उनीहरूको प्रारम्भिक-महिनाको सदस्यता समाप्त भए पछि months महिना निःशुल्कको लागि प्राप्त गर्न सक्दछन् यदि तिनीहरूले केही उपयुक्त फेला पारेन भने।
११. जूस्क - ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय
Zoosk एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा सबै भन्दा ठूलो प्लेटफार्महरु मा एक, दुनिया भर मा worldwide० मिलियन भन्दा बढी सदस्य संग गर्व गर्दछ। प्रत्येक दिन, यी प्रयोगकर्ताहरूले २ different फरक भाषाहरूमा million लाख भन्दा बढी सन्देशहरू सबमिट गर्छन्। चिडियाखाना 80० भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा सञ्चालन गर्दछ।
वेबसाइटले "व्यवहारिक म्याचमेकिंग टेक्नोलोजी" नाम गरेको केहि चीज प्रयोग गर्दछ जुन एकललाई स्वर्गमा बनेको खेलको लागि समान हुन सक्ने उपयुक्त व्यक्तिहरू खोज्न मद्दत गर्दछ।
एक नि: शुल्क परीक्षण अवधि पछि, एक Zoosk सदस्यता लागत membership 29.99 प्रति महिना।
१२. Reddit R4R - Reddit प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्तम
R4R, वा Redditor को लागी रेडडिटर, एक subreddit जडान प्रयोगकर्ताहरूलाई समर्पित छ। प्लेटफर्मले मिल्दो योजना प्रयोग गर्दैन, यसको सट्टामा, यो व्यक्तिगत विज्ञापनहरूको एक विशाल स्थल हो।
प्रयोगकर्ताको खोजी मापदण्डले उनीहरूको मनपर्ने परिणामहरू ल्याउँछ। Reddit उपभोक्ताहरू यसको गतिविधिहरू, साथीहरू, पार्टीहरू, हुकअपहरू, र यहाँ सम्म कि दीर्घकालीन सम्बन्धहरू खोज्न प्रयोग गर्दछ।
जे होस् यो सामान्यीकृत फोरम हो, तैपनि उमेर, गोपनीयता, वैधानिकता, र आचरण सम्बन्धी नियमहरू छन्। उदाहरण को लागी, NSFW पोष्ट को लागी अनुमति छ तर लेबल को रूप मा हुनु पर्छ जस्तै प्रयोगकर्ताहरु पनी हेर्न चाहानुहुन्छ वा पोष्ट हेर्न को लागी निर्णय गर्न सक्छन्।
१.. OkCupid - नि: शुल्क र लोकप्रिय
OkCupid एक धेरै प्रख्यात डेटि of साइटहरू मध्ये एक हो र विस्तृत प्रोफाइलहरू प्रस्तुत गर्दछ जुन अन्य सदस्यहरूले जडान गर्नु अघि राम्ररी स्क्यान गर्न सक्दछन्। यो दुबै डेस्कटप र मोबाइल संस्करणमा उपलब्ध छ, विवरणको भारीसहित जुन उत्तम परिणामहरूका लागि प्रयोगकर्ताहरूले भर्न सक्छन्।
साइट धेरै समावेशी हो, २० भन्दा बढी लि gender्ग र यौन झुकाव छनौटहरूको साथ।
१.. एशले मेडिसन - उत्तम विवाहित डेटि। साइट
एशले म्याडिसन एक प्रकारको हो, विवाहित व्यक्तिहरूको लागि निजी मामिलाहरू खोज्नको लागि बनाईएको। यो कारणका लागि सामाजिक मिडिया खाताहरूमा जडान भएको छैन।
त्यहाँ अन्य गोपनीयता प्रतिबन्धहरू र सुविधाहरू छन् यदि प्रयोगकर्ताहरू अज्ञात रहनमा मद्दत गर्दछन् यदि तिनीहरू समातिनबाट डराउँछन्। थप रूपमा, एशले म्याडिसनसँग ट्राभल विकल्प छ जहाँ सदस्यहरूले आफ्नो आगामी स्थान अग्रिममा खोजी गर्न सक्दछन्।
Match.com - म्याच १ 1995 1995 since देखि नै भएको छ र म्याचमेकि and र डेटि। विचारहरूमा सहभागीहरूलाई मद्दत गर्न एक भर्चुअल डेटि ment सल्लाहकार कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
टिन्डर - यो डेटि app अनुप्रयोग व्यापक रूपमा लोकप्रिय छ र विश्वसनीयताको साथ आउँदछ। धेरै मानिसहरूले यसलाई हुकअपको लागि प्रयोग गर्छन्, यसको विशाल प्रयोगकर्ता आधार र स्थान-संचालित एल्गोरिदमहरू।
ब्ल्याकपियपमीट - १ 18 बर्ष भन्दा बढी ब्ल्याकपिप्पलेटले प्रेम खोज्दै अफ्रिकी अमेरिकी एकललाई जोडेको छ। साइटका १००,०००+ सदस्यहरूले इश्कबाजी, ईमेल, र कसले तिनीहरूको प्रोफाइल अवलोकन गर्न सक्छन् हेर्न सक्दछन्।
ग्राइन्डर - ग्राइन्डर LGBTQA + व्यक्तिको लागि मात्र हो। यो स्थानमा आधारित छ, र प्रयोगकर्ताहरू मुख्यत: यो हुकिंगका लागि प्रयोग गर्दछन्, यद्यपि लामो-अवधिका म्याचहरू पनि सम्भव छन्।
धेरै माछा - यो डेटि website वेबसाइट क्यानाडामा आधारित छ, तर प्रयोगकर्ताहरूलाई विश्वभरिबाट व्यक्तिसँग सञ्चार गर्न अनुमति दिन्छ।
किन व्यक्तिहरू अनलाइन डेटिites साइटहरू प्रयोग गर्छन्?
डेटि sites साइटहरूले व्यक्तिहरूको धेरै ठूलो पोखरीमा एक्लो व्यक्तिको तुलनामा व्यक्तिलाई खुलासा गर्दछन् वास्तविक जीवनमा भेट्ने मौका हुन्छ। यो विशेष गरी प्रयोगकर्ताहरूको लागि केस हो जुन सीमित सामाजिक समूह छ, शहरमा नयाँ छन्, वा अन्यथा।
यी साइटहरूको प्रयोगले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण भएका मापदण्डहरूमा आधारित अधिक छनौटको लागि अनुमति दिन सक्छ: साझा मानहरू, शौकहरू, वा उनीहरूले चाहेको सम्बन्धको प्रकार।
के डेटि Apps अनुप्रयोगहरू सुरक्षित छन्?
सामान्यतया, हो, डेटि apps अनुप्रयोगहरू सुरक्षित छन्, तर यसलाई अझै विवेक र सावधानीको आवश्यकता पर्दैन। अनुप्रयोगहरूसँग गोपनीयता सुविधाहरू स्थानमा छन् सदस्यहरूलाई मद्दत गर्न जस्तै प्रोफाइल प्रमाणीकरण। केहि वेबसाइटहरूले प्रक्रियामा सुरक्षाको अतिरिक्त तह थप्दै सहभागीहरूलाई मैन्युअल्ली स्क्यान गर्दछ।
व्यक्तिहरूले वास्तविक जीवनमा कसैलाई भेट्नु भन्दा पहिले कहिले पनि व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गर्नु हुँदैन, जस्तै तिनीहरूको थर, ठेगाना, वा उनीहरूको छिमेक। सार्वजनिक स्थानमा पहिलो मिति मिलाउन यो स्मार्ट पनि छ। पहिले नै मित्रलाई सम्पर्क गर्नु र उनीहरूलाई थाहा दिनु कि तिनीहरू अपरिचितसँग डेटमा चल्दैछन् पनि यो गलत विचार होइन।
कसरी अनलाइन डेटि While गर्दा तपाईंको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने?
अनलाइन कसैलाई कहिले पनि व्यक्तिगत जानकारी नदिनुहोस्, विशेष गरी व्यक्तिमा भेट्नु अघि। यस जानकारीमा थर, रोजगारदाता, ठेगाना, र छिमेकी सामेल छन्।
कसैलाई अनलाइन भेट्दा, सार्वजनिक स्थानहरूमा हुनको लागि पहिलो केहि मितिहरूको लागि व्यवस्था गर्नुहोस्। यो क्याफे, होटेल, थिएटर, वा केही अन्य सार्वजनिक ठाउँ हुन सक्छ। पृथक क्षेत्रहरू जस्तै समुद्री तटबाट जोगिनुहोस्, र घरमा अपरिचितहरूलाई कहिल्यै अनुमति नदिनुहोस्।
अन्त्यमा, मिति भन्दा अगाडी बड्डीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन र अपेक्षित फिर्ती समयको बारेमा तिनीहरूलाई जानकारी दिन। उनीहरूलाई सूचित गर्नुहोस् जब यो घर छोड्ने समय हो। सुरक्षाको थप तह प्रदान गर्नका लागि अनुरोध गर्नुहोस् उनीहरूले कल गरे वा मितिमा पाठलाई अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्न।
पहिलो मिति सुझावहरू
पहिलो पटक डेटि overwhel अति भारी हुन सक्छ! इष्टतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र व्यक्तिगत रूपमा भेट गर्न, यी सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्:
खुला दिमाग राख्नुहोस्। व्यक्ति अनलाइन भन्दा व्यक्तिमा धेरै फरक देखिन सक्छ, त्यसैले प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्नका लागि तयार हुनुहोस्।
धेरै औपचारिक हुनुबाट जोगिनुहोस्। एक सामाजिक बैठक स्थापना, जस्तै खाजा मिति, प्रयोगकर्ताहरू सँगै घण्टा बिताउन बाध्य महसुस नगरी एक अर्कालाई जान्न अनुमति दिन्छ।
मितिमा जानु अघि कुराकानीहरूको समीक्षा गर्नुहोस्। व्यक्तिको प्रोफाइल पुन: पढ्नुहोस् र छलफल गरिएको कुराको समीक्षा गर्नुहोस्, र सामान्य छलफल शीर्षकहरूको अनुसूची गर्नुहोस्।
डेटि Online अनलाइन हुँदा यो गम्भीर सम्बन्ध विकास गर्न सम्भव छ?
हो, यो सम्भव छ! यदि दुई व्यक्ति भेट्छन्, अनुकूल छन्, र रसायनशास्त्र उपस्थित छ, सम्बन्ध स्थिर र सुरक्षित केहि मा बदलिन सक्छ। यो प्रत्येक दिन हुन्छ, एहार्मोनी जस्ता साइटहरूको लागि धन्यवाद।
निष्कर्षमा अनलाइन डेटिites साइटहरू
अनलाइन डेटि to को चाल व्यक्तिलाई उनीहरूले के चाहान्छन् र पहिले नै सम्बन्धमा आवश्यक छ भनेर जान्नको लागि हो। माथिको सूचीमा आधारित, त्यहाँ यी साइटहरूमा फेला पार्न धेरै प्रकारका सम्बन्धहरू छन्।
सावधानी बनाउनुहोस् तर खुला दिमाग डेटि site साइट प्रयोग गर्दा। यहाँ प्रत्येक साइट संग केहि प्रस्ताव को लागी छ, उपयोगकर्ता को इच्छा के आधार मा।
अधिक उत्पाद तुलना र समीक्षाका लागि tigersoftinder.com हेर्नुहोस्।
अस्वीकरण: जानकारी सल्लाह वा खरीद गर्न को लागी प्रस्ताव गर्दैन। माथिको प्रेस विज्ञप्तिबाट गरिएको कुनै खरीद तपाईंको आफ्नै जोखिममा गरिएको छ। त्यस्ता कुनै खरीद गर्नु अघि विशेषज्ञ सल्लाहकार वा पेशेवरको सल्लाह लिनुहोस्। यस लि from्कबाट बनाइएको कुनै खरीद अन्तिम स्रोत र सर्तहरूको विषय छ वेबसाइटको बिक्री को स्रोतमा उल्लेख छ। सामग्री प्रकाशक र यसको डाउनस्ट्रीम वितरण साझेदारहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै जिम्मेवारी लिदैनन्। यदि तपाइँसँग यस लेखसँग सम्बन्धित कुनै उजुरी वा कपीराइट मुद्दाहरू छन् भने कृपया यो खबरको बारेमा रहेको कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यस उत्पादनको समीक्षामा समावेश लिंकले लेखकलाई सानो आयोगको नतिजा लिन सक्छ यदि तपाईलाई कुनै थप लागत बिना सिफारिस गरिएको उत्पादन खरीद गर्नुभयो भने।
१ Find सर्वश्रेष्ठ अनलाइन डेटि Apps अनुप्रयोगहरू सम्बन्ध फेला पार्न
सामाजिक दूरीको अभ्यासको लामो अवधि पछि फेरि तपाईंको खुट्टा डेटि world संसारमा डुबाउन आशा गर्दै? यदि सम्भावित नयाँ पार्टनरसँग "पहिलेको समय" मा मेल खाने कुरा जटिल थियो — मिक्समा विश्वव्यापी महामारी जोड्नाले त्यस चिंगारी वा जडान फेला पार्न यसलाई झन्झटिलो बनाएको छ। यो नयाँ सामान्य समयमा, एक अनलाइन डेटि app अनुप्रयोगमा सम्भावित प्यारामर्सको साथ फ्लर्टिंग कसैलाई चिन्नको लागि उत्तम तरिका हुन सक्छ।
तर सत्य यो हो कि अनलाइन डेटि overwhelले भारी महसुस गर्न सक्दछ। यो केवल केही फोटो र एक-लाइन बायोसको आधारमा निर्णय गर्नुपर्दैन, वा अपरिचितहरूलाई प्रत्यक्ष सन्देशहरू (वा डीएमहरू) पठाउने अनौठोपन मात्र भूत हो। अनुप्रयोगहरू र प्रयोगकर्ताहरूको सरासर संख्या केवल स्वाइप गर्न कठिन काम जस्तो लाग्न सक्छ।
वास्तवमा, अनलाइन डेटिङ दर्शक अनुसार, 2023 द्वारा 37,5 लाख प्रयोगकर्ताहरूलाई बढ्न अपेक्षा छ डाटा Statista देखि। र २०40० सम्ममा, eHarney पूर्वानुमान गर्दछ कि 70० प्रतिशत जोडीले आफ्नो सम्बन्ध अनलाइन सुरू गरिसकेका हुनेछन्। यो सम्भव छ कि डेटि world संसारलाई व्यवस्थित महसुस गर्न को लागी बनाउने छ, यद्यपि तपाईले सही अनुप्रयोग खोज्नु पर्छ। उदाहरण को लागी, त्यहाँ को लागी विशेष प्लेटफार्महरु छन् खेती , बेकन , वा दाह्री स्ट्रोक (हो, गम्भीरतापूर्वक) लाई मन पराउनेहरूका लागि ।
त्यसोभए यदि तपाईं with० बर्ष भन्दा बढि कोहीसँग सम्बन्ध विच्छेद पछि नयाँ डेटि, गर्दै, भर्चुअल भिडियो मिति आशा गर्दै, वा सम्बन्धको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी अनलाइन डेटि apps अनुप्रयोगहरू (केहि पनि नि: शुल्क) सबै कभर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने बेसहरु।
म्याच १ popular राज्यहरूमा सब भन्दा लोकप्रिय अनलाइन डेटि app अनुप्रयोग हो जुन पीसीमेगको सर्वेक्षण अनुसार २,००० मान्छेहरू छन्। OG डेटि services सेवाहरू मध्ये एकको रूपमा (यो वेबसाइटबाट मात्र वेबसाइट र अनुप्रयोगमा सारिएको छ), मिलानसँग गम्भीर सम्बन्ध खोज्ने 45 45 र between 65 बीचका लागि एक विशिष्ट अपील छ; सर्भेमोन्की द्वारा गरिएको थप अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि adults years--54 वर्ष पुरानो वयस्क मध्ये 58 58 प्रतिशतले खेल प्रयोग गर्दछ, टिन्डर प्रयोग गर्ने भन्दा दुई गुणा बढी। तपाईं यसलाई नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि यसले तपाईंलाई ब्राउज गर्न प्रतिबन्धित गर्दछ; यदि तपाईं वास्तवमा सम्भावित साझेदारहरूलाई सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ भने, सदस्यताहरू month २१.99। मा एक महिनामा सुरू हुन्छ।
२. हाम्रो समय
डेटि apps अनुप्रयोगहरू हजारौं वर्षका लागि मात्र होईन; प्रविधि र अनुसन्धान कम्पनी मोर्निंग कन्सल्टको सर्वेक्षण अनुसार to 55 देखि 64 64 वर्ष बीचका २० प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले डेटि app अनुप्रयोग वा सेवा प्रयोग गरेका छन् । हाम्रोटाइमले यसको टाउकोमा हुकअप संस्कृतिको विचार बदल्छ; यसको साटो, यसले पेन pals, मित्रहरु, मितिहरु, दीर्घकालीन सम्बन्धहरु र विवाह साझेदार को लागी खोजी गर्न को लागी प्रोत्साहित गर्दछ । फ्रि-टु-डाउनलोड अनुप्रयोगले तपाईंलाई ईमेलहरू, फ्लर्ट, र सम्भावित साझेदारहरूसँग मेल खाने, र एक प्रीमियम सदस्यता ($ per मासिक)) अतिरिक्त सुविधाहरूको लागि अनुमति दिन्छ जस्तै कसले तपाईंको प्रोफाइल मनपराएको छ।
बम्बलले आफैंमा सेट गर्‍यो अन्य डेटि services सेवाहरू अनुप्रयोग स्टोरको भीडले महिलालाई पहिलो चाल बनाउनुपर्दछ एक पटक एक मैच भए पछि। तपाईंले सन्देश पठाउन २ 24 घण्टा मात्र पाउनुहुनेछ, जबसम्म तपाईंले बूस्ट सदस्यतामा लगानी गर्नुहुन्न, जुन एक हप्ताको लागि $ १०.$ 99 मा सुरु हुन्छ। महिलाहरूले अनुप्रयोगलाई मन पराउँछन् किनकि यसले अनावश्यक सन्देशहरूको संख्यामा कटौती गर्दछ, र पुरुषहरूले यसलाई मनपराउँदछन् - वास्तवमा, पीसीमेगको सर्वेक्षणमा बम्बल मन पराउने 58 58 प्रतिशत उत्तरदाताहरू नै थिए - किनकि यसले दबाबको केही थालनी गर्न थाल्छ। साथै, एकचोटि तपाईंले आफूले रूची पाएको कसैलाई भेट्टाउनुभयो भने, तपाईंसँग अनुप्रयोगमा भिडियो मितिमा जान विकल्प छ।
टिन्डरले "हुकअप संस्कृति" ल्याएको हुन सक्छ, तर यो अझै पनि अमेरिका मा शीर्ष डेटि apps अनुप्रयोग मध्ये एक हो यसको लगभग million मिलियन प्रयोगकर्ताहरू छन्, स्टिस्टाले सर्वेक्षण गरेको अरू कुनै डेटि app अनुप्रयोग मध्ये धेरै । यसको मतलब तपाईसँग अन्ततः राम्रोसँग ठ्याक्कै मिल्ने सम्भावना हुन्छ जसले तपाईको रुचिलाई जोड दिन्छ - जहाँ पुग्न त्यहाँ धेरै बायाँ स्वीपिंग लिन्छ। अनुप्रयोग नि: शुल्क छ, तर तपाईं टिन्डर प्लस जस्ता प्रीमियम सुविधाहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन month 99 99aमा एक महीनामा शुरू हुन्छ।
Fish. प्रशस्त माछा
मूल डेटिंग को अर्को एउटा वेबसाइट-गरिएका-अनुप्रयोगहरूले एउटा आँखा सम्बन्ध फेला तर्फ POF थियो यसको heydey मा 90 लाख प्रयोगकर्ताहरू। यो अझै लोकप्रिय छ (स्टिस्टाले यसलाई दोस्रो नम्बरको रूपमा दर्जा दियो), र अनुप्रयोगले दावी गर्दछ कि तपाईं २.7 गुणा बढी सम्भावना हुनुहुन्छ तपाईंको पहिलो २ hours घण्टामा अन्य अनुप्रयोगहरूको तुलनामा। मा मतदान यसको महिला प्रयोगकर्ताहरू, अनुप्रयोग 44 प्रतिशत एकल आमा-र थिए तिनीहरूले साझेदार 10 प्रतिशत औसत प्रयोगकर्ता भन्दा छिटो भनेर फेला परेन। डाउनलोड गर्नुहोस् र नि: शुल्क स्वाइप गर्नुहोस्, र बढि फोटोहरू थप्नको लागि अपग्रेड गर्नुहोस् वा partners १ partners .99 at मा सुरू हुने सम्भावित साझेदारहरूलाई पहिले देखाउँनुहोस्।
अनुप्रयोगको प्रश्नावली र प्रोम्प्ट्स भरे पछि (मानक आइसब्रेकरहरू सोच्नुहोस् जस्तै: "मेरो सबैभन्दा ठूलो पाल्तु पिली भनेको…" र "मेरो गो-टु कराओके गीत हो ..."), हिन्जले तपाईंलाई साझा रूचि साझा गर्ने प्रयोगकर्ताहरूसँग मिलाउन सुरु गर्दछ। एल्गोरिथ्मले तपाईंलाई तपाईंको “ धेरै मिल्दो ” खेलहरू पनि दिन्छ - जो तपाईं आठ गुणा बढी बाहिर जानुहुन्छ, तिनीहरू भन्छन्। र अनुप्रयोगले मात्र देखाउँदछ कि कति जना व्यक्तिले तपाईंलाई मन पराउछन्, यसले तपाईंलाई तपाईंको बारेमा के मनपर्दछ भनेर पनि बताउँदछ, कुराकानी सुरु गर्न सजिलो बनाउँदछ।
ओकेकपिडको एल्गोरिथ्मले प्रश्नहरूको श्रृंखला प्रयोग गर्दछ "कुन प्रतिशत" तपाईले यसको पचास लाख प्रयोगकर्ताहरूसँग मिलाउनुहुनेछ। त्यो अनुकूलता-संचालित फोकस विशेष गरी महिलाहरूलाई अपील गर्दछ, जसले पीसीमेगको सर्वेक्षणमा यस अनुप्रयोगलाई प्राथमिकता दिने 58 percent प्रतिशत उत्तरदाताहरू बनायो। यो पनि उत्कृष्ट समावेशी हो, १२ लि gender्ग पहिचान र २० यौन अभिमुखीकरण प्रस्ताव गर्दै ताकि तपाईं आफैंलाई परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं चाहानुहुन्छ र ठ्याक्कै कसलाई खोज्नुहुन्छ।
मूल रूपमा फेसबुक अनुप्रयोग, Zoosk अब त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो डेटि sites साइटहरू मध्ये एक हो, २०० 2007 मा यसको प्रक्षेपण पछि million० मिलियन भन्दा बढी डाउनलोडहरूसहित। आज, यसका १० लाख भन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू छन्, स्ट्याटिस्टाका अनुसार — र ती मध्ये ,000००,००० सदस्यहरूले भुक्तानी गरिरहेका सदस्यहरू छन्, जसको मतलब आधा भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू एक खेल भेट्न गम्भीर रूपमा प्रतिबद्ध छन्। तपाइँलाई लामो प्रश्नावली भर्न जबरजस्ती गर्नुको सट्टा, अनुप्रयोगको एल्गोरिथ्म नोटहरू जसले तपाइँसँग अन्तर्क्रिया गरिरहनुभएको छ सम्भावित खेलहरू राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न।
यस बिन्दुमा, eHarney घरको नाम हो। यो म्याचको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी हो, र यो दुई ठूला उमेर समूहहरू -०- to 44 देखि-44-वर्ष-उमेर र-55- to 64 देखि---उमेर-उमेरका हुन्। साइन-अप प्रक्रिया - जसमा एक धेरै विस्तृत, १ 150०-प्रश्न प्रश्नावली सामेल छ - एक यात्रा हो, तर ब्रान्डले एक पटक युएस प्लसमा of% विवाह सिर्जना गर्न जिम्मेवार भएको दाबी गर्‍यो, प्रीमियम सदस्यता सदस्यहरूसँग जाने विकल्प थियो। व्यक्तिमा भेट्नु अघि भिडियो मिति।
१०. कफिले ब्याजेललाई भेट्छ
दिनहुँ दिउँसो, कफि मीट्स ब्यागल क्युरेट गर्दछ र तपाईंलाई क्वालिटी म्याचहरू पठाउँदछ — वा "ब्यागल्स" उनीहरूले बोलाउँदछन् - यसको एल्गोरिथ्मद्वारा चयन गरिएको। कुनै स्वाइप शामिल र सीमित दैनिक चयनको साथ, यो अनुप्रयोग नहुनको लागि डिजाइन गरिएको हो। साथै, गहन प्रोफाइल र "आइस ब्रेकर" प्रश्नहरूले अर्थपूर्ण कुराकानीलाई प्रोत्साहित गर्दछ, यस अनुप्रयोगलाई गम्भीर सम्बन्धहरू सुरू गर्न खोज्नेहरूको लागि उत्तम बनाउँदछ।
१ million मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूसँग, हिलीले "हे, म तिमीलाई मन पराउँछु!" अनुप्रयोगले लगातार म्याचमेकिking सुधार गर्न एआई प्रयोग गर्दछ, र तपाई को हुन् अझ राम्ररी क्याप्चर गर्न मद्दत गर्नको लागि हिली कथाहरू जस्ता सुविधाहरू छन्। अनुप्रयोग निःशुल्क छ, एक विज्ञापन मुक्त र इन्कग्निटो-मोड अनुभव को लागी वैकल्पिक सदस्यता संग।
यदि तपाईं साथी ब्लैक एकल खोज्दै हुनुहुन्छ जसले तपाईंको रूचिहरू साझा गर्दछ, BLK एक डेटि app अनुप्रयोग हो जुन उनीहरूको समुदायमा त्यो जडान फेला पार्नमा माहिर छ। Million मिलियन भन्दा बढी डाउनलोडसँग, नि: शुल्क अनुप्रयोगले तपाईंलाई सम्भावित साझेदारहरूसँग मेल खाने र च्याट गर्न अनुमति दिन्छ। वा, एक विज्ञापन मुक्त अनुभव को लागी एक प्रीमियम सदस्यता (month १० प्रति महीना) मा अपग्रेड गर्नुहोस्, बढाएको प्रोफाइल, असीमित मनपर्दो संख्या, र कसैलाई दोस्रो मौका दिएर "रिवाइन्ड" गर्ने क्षमता।
त्यो प्यारा छिमेकीमा क्रस प्राप्त गर्नुभयो तर उनको वा उसका नाम थाहा छैन? तपाईको कुकुरलाई हिंड्दा नियमित रूपमा कसैको साथ आँखा सम्पर्क बनाउनुहोस् तर कुराकानी सुरु गर्नुभएको छैन? Happn एक डेटि app अनुप्रयोग हो कि यस्तो लाग्न सक्छ कि हराएको कनेक्शन वास्तविकता बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंको फोनमा स्थान प्रयोग गरेर, तपाईं नजिकका व्यक्तिहरूसँग पनि मेल खान सक्नुहुनेछ। १०० मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूसँग, सम्भावनाहरू तपाईले आफ्नो छिमेकी क्रस फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
क्वीर महिलाहरू द्वारा बनाइएको, यो LGBTQ + डेटिंग अनुप्रयोग (र सामाजिक प्लेटफर्म) महिला र गैरबिनरीहरूका लागि हो जुन सुरक्षित ठाउँमा प्रेम पाउन चाहन्छन्। तिनीहरूको million मिलियन प्रयोगकर्ताहरूको लागि, HER ले ती स्पार्कहरूलाई उडान गर्न प्रोत्साहित गर्न मद्दतको लागि इन-एप समुदायहरू र होस्टिंग घटनाहरू प्रदान गर्दछ।
१.. भित्री घेरा
यदि तपाईं आफ्नो अर्को आधा पत्ता लगाउन गम्भीर हुनुहुन्छ र शून्यतामा स्वाइप गर्नबाट बच्न चाहानुहुन्छ भने, इनर सर्कलले सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई "मिति बेटर प्लेज" स्वीकार्नु पर्छ जसले "आदरणीय, भरपर्दो र समावेशी" हुने प्रतिबद्धतालाई वर्णन गर्दछ। अनुप्रयोगले विस्तृत प्रोफाइलहरू, अद्वितीय फिल्टरहरू, र कुराकानी प्रम्प्टहरू प्रदान गर्दछ — त्यसैले तपाईं ड्रेडेड वन-लाइनर "हे" सन्देशहरूलाई वेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ।
सर्वश्रेष्ठ डेटि Apps एप्सले यसलाई एक बर्ष मायाको लागि बनाउँदछ
सबैलाई थाहा छ कोही जसले आफ्नो "सदाका लागि व्यक्ति" लाई भेट्टाए जबकि अनलाइन डेटि but तर आफ्नै डेटि like जस्तै, तपाईं को लागी सही साइट पत्ता लगाउन केहि परीक्षण र त्रुटि लिन सक्छ। कोचवा कलेक्टिक, सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र मोबाइल डाटा बजारको होस्ट, प्रयोगकर्ताहरूको संख्याको आधारमा केहि साइटहरू सिफारिस गर्न संख्याहरू संकुचित गर्‍यो। "हामीसँग .5..5 अरब भन्दा बढी उपकरणहरूमा डाटा उपलब्ध छ," कोचभाको नेतृत्व प्रबन्धक, जेक कोर्ट्रेट भन्छन्। "यो डेटा सेट को एक हिस्साको रूपमा, हामी यी उपकरणहरूमा 'अनुप्रयोग ग्राफ' जानकारी छ, जो अनिवार्य रूपमा यी उपकरणहरूमा स्थापित अनुप्रयोगहरूको सूची हो। हामीले गुगल प्ले र अनुप्रयोग स्टोरहरूमा सबै प्रमुख डेटि apps अनुप्रयोगहरूमा एक नजर लियौं, र त्यसपछि हाम्रो डाटा सेटमा सब भन्दा बढी स्थापना भएका पाँच अनुप्रयोगहरू पहिचान गर्यौं। ”
तर किनभने हामी सबैले संख्यामा आधारित निर्णय गर्दैनौं, हामीले यो सूचीलाई केहि अन्य विकल्पहरू सहित गोल गर्‍यौं जुन तपाईंको विशिष्ट अवस्था अनुकूल हुन सक्दछन्। यी मध्ये केही LGBTQ + व्यक्तिहरू, केहि उमेरका प्रयोगकर्ताहरू, कालो वा BIPOC प्रयोगकर्ताहरू, साधारण र अन्यमा खास रुचि भएका मानिसहरूलाई मन पराउँछन् कि तिनीहरू एक भन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरूमा उनीहरूको सही मिति पाउन सक्दैनन्। चाहे तपाईं क्याजुअल फिlingिंग खोज्दै हुनुहुन्छ, एक ब्रेकअपमा जानका लागि एक रिबाउन्ड वा तपाईंको अर्को दीर्घकालीन सम्बन्ध, तपाईं यी डेटि apps अनुप्रयोगहरू मध्ये एउटा डाउनलोड गरेर सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं कहिले पनि अनलाइन हुनुभएको छ भने, तपाईंलाई सम्भवतः टिन्डरको बारेमा थाहा छ। कोचभा कलेक्टिवका अनुसार, अनुप्रयोगसँग सबै डेटि apps अनुप्रयोगहरूको प्रयोगकर्ता संख्या सर्वाधिक छ। जबकि धेरै प्रयोगकर्ता अनौपचारिक भेट-अपको लागि टिन्डरमा जान्छन्, अरूले यहाँ लामो समयसम्म प्रेम पाएका छन्।
बम्बलमा, महिलाहरू जसले सञ्चारको थालनी गर्छन्। अवश्य पनि, जुन लि the्गले पहिलो कदम चाल्दछ LGBTQ + महिलाहरूको लागि कम मुद्दा हो, तर साथीहरू खोज्ने महिलाहरूले यसलाई ताजा हावाको सास फेर्न सक्छन्। कोचाभा भन्छन कि धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरू पनि २-- to 35 देखि-year वर्ष पुरानो उमेर दायरामा पर्दछन्, त्यसैले युवा डेटर्सले पनि यसलाई मनपर्दछ।
केही समयको लागि डेटि in खेलमा रहेको जो कोहीले सायद ओककुपिडको बारेमा सुनेको छ जुन २०० 2004 देखीरहेको छ। ओजीसँग अब तपाईको सही हस्ताक्षरसहितको एउटा अनुप्रयोग छ जुन धर्मबाट बदाम बटर बनाम जेलीसम्म सबै चीजको बारेमा तपाइँलाई तपाइँको सही पार्टनर भेट्टाउन मद्दत गर्दछ।
कोचाभाद्वारा प्रोफाइल गरिएको अनुप्रयोगहरू मध्ये, यसमा बम्बल पछि सबैभन्दा कान्छो प्रयोगकर्ता आधार थियो, यसको आधा भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू 36 of बर्ष भन्दा कम उमेरमा आएका थिए। र, यो नामको आधारमा यस साइटले विश्वको सबैभन्दा ठूलो डेटि plat प्लेटफर्ममध्ये एक भएको दाबी गर्‍यो। ।
केही अधिक हाँस्न रेखा र चाँदीका किनारहरू भएका प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो डेमोग्राफिकमा बढी व्यक्तिहरू सहित एक एपमा मायालु आत्माहरू पाउन सक्छन्। कोचभाका डाटाले देखाउँदछ कि मीटमेमका अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू-46- to 55 देखि-55 वर्ष पुरानो दायरामा छन्, closely 55 देखि 65 65 कोष्ठकको नजिकबाट।
विस्तृत प्रयोगकर्ता आधार भएको बाहेक, कोचभाले त्यस स्थानमा आधारित अधिक डेटि women एपलाई डाउनलोड गर्ने हप्न, स्थान आधारित डेटि app अनुप्रयोगको रूपमा टिप्पणी गर्छिन्। जेन्टहरू खोज्ने महिलाहरू, तपाईका पक्षमा नहुनु सजिलो होस्।
उत्तम डेटि Apps अनुप्रयोगहरू
हाम्रा सम्पादकहरूले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान, परीक्षण, र उत्तम उत्पादनहरू सिफारिस गर्छन्; तपाईं हाम्रो समीक्षा प्रक्रियाको बारेमा यहाँ अधिक जान्न सक्नुहुनेछ। हामी हाम्रो छनौट लिंकबाट बनाईएको खरीदमा आयोगहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं।
लुइस अल्वारेज / गेट्टी छविहरू
डेटि apps अनुप्रयोगहरूको दुनियामा सजीलो भारी हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाइँ वास्तवमा के डाउनलोड गर्ने भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने। केहि अनुप्रयोगहरू छोटो अवधिका सम्बन्धका लागि हुन्, जबकि अन्यले ककटेल वा फेसटाइम कफीको लागि भेट गर्नु अघि एक अर्कालाई साँच्चिकै चिन्न प्रोत्साहित गर्छन्। चाहे तपाईं तल गएको ठाउँमा खोज्दै हुनुहुन्छ वा क्याजुअल फिली for्गको लागि, त्यहाँ एक सेवा तपाईंको लागि उपयुक्त छ।
यहाँ हामीले सब भन्दा राम्रा डेटि round अनुप्रयोगहरू मिलाएका छौं, ता कि तपाईं आफ्नो खेल भेट्न सक्नुहुनेछ - त्यो कि रातको लागि हो वा सदाका लागि।
२०२१ को सर्वश्रेष्ठ डेटि Apps अनुप्रयोगहरू
सबै भन्दा राम्रो: Hinge
विवाहका लागि सर्वश्रेष्ठ: खेल
एक्सक्लुसिविटीका लागि सर्वश्रेष्ठ: राया
पहिलो मितिहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ: बम्बल
सर्वश्रेष्ठ LGBTQ डेटि App अनुप्रयोग: उनको
यहूदी डेटि forका लागि उत्तम: जेस्विप
क्याजुअल डेटि forका लागि उत्तम: टिन्डर
किन हामी यो छनौट गर्दछ : हिन्जले तपाईलाई दिनको सिमित संख्याको कनेक्शन दिन्छ, यसले अधिक गम्भीर सम्बन्धहरूको लागि खोजी गर्ने व्यक्तिहरूको लागि उत्तम विकल्प बनाउँदछ।
मनपर्ने र मन नपर्ने लगायतका व्यक्तिको बारेमा अधिक जानकारी साझा गर्दछ
अर्थपूर्ण कुराकानी र सम्बन्ध निर्माणमा बढी केन्द्रित महसुस गर्दछ
केवल अपग्रेडको लागि भुक्तान नगरे सम्म मिल्दो संख्याको प्रस्ताव गर्दछ
व्यक्तिलाई मिलाउन "गुलाब" दिन भुक्तान गर्न चाहन्छ, अनुप्रयोगलाई अलिकता भ्रमपूर्ण बनाउँदै
तपाईंको नेटवर्कमा साथी साथीहरू र व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्ने तरीकाको रूपमा हिज सुरू भयो। जब यो सीईओ जस्टिन म्याक्लिओड द्वारा स्थापना गरिएको थियो, अनुप्रयोगले व्यक्तिहरू निकटतामा आधारित प्रोफाइल र उनीहरू साझा साझा गर्ने फेसबुक साथीहरू देखायो। अब, यो केवल प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरू छनौट गरेको नजिकको व्यक्ति संग कनेक्ट गर्दछ।
प्रयोगकर्ताहरू कसैसँग कुराकानी बटन ट्याप गरेर र मिलान वा पृष्ठमा टिप्पणी छोड्दै कसैसँग सम्पर्क गर्न छनौट गर्न सक्दछन्। प्रोफाइलहरूले कुराकानीलाई "यस्तै माया गर्नु गलत हो भने, म सही हुन चाहन्न ..." र "तपाइँको बारेमा जान्न मन पराउनुपर्ने एक चीज भनेको छ…" भन्ने प्रस्ताव गर्दछ।
हेन्जले तपाईंलाई व्यक्तिहरूको बारेमा बढी जानकारी देखाउँदछ, त्यसैले यदि तपाईं इन्टरनेटबाट अपरिचितहरू भेट्न असहज हुनुहुन्छ भने, यसले सजिलो बनाउँछ। यसले तपाईंलाई व्यक्तिहरूको अन्तिम नाम र सामान्यतया उनीहरूको छिमेक, उमेर, उचाई, काम, गृहनगर, र कलेज दिन्छ।
अनुप्रयोग नि: शुल्क छ तर मान्छेहरूले भुक्तानी गर्न चाहन्छ, भर्चुअल "गुलाब" का लागि भुक्तान गर्न भन्दै जुन तपाईले खोजिरहनु भएको आधारमा सेवाले तपाइँको लागि छनौट गरेको सेवाको लागि मेल खान्छ। यो सबै धेरै स्नातक को एक एपिसोड जस्तै महसुस गर्दछ । तपाईको उत्तम खेलको लागि एल्गोरिदम दैनिक पिक पनि कुख्यात रूपले सहयोगी हुँदैन। धेरै चोटि उनीहरूले कसैलाई धेरै टाढा वा जथाभावी विभिन्न राजनीतिक सम्बद्धताका साथ छनौट गर्नेछन्। केहि केसहरूमा, तिनीहरूले तपाईंलाई पहिले नै थाहा पाएको कसैलाई देखाउँछन् जुन थोरै असहज हुन सक्छ।
अन्य अनुप्रयोगहरू जस्तो नभई तपाईसँग दुबै सन्देश पठाउन अघि मेल गर्न सहमत हुनुपर्दछ, हिन्जमा रहेका व्यक्तिले कुराकानीको लागि तपाइँलाई एक ओपनर सन्देश पठाउन सक्दछन्। यो नि: शुल्क छ, त्यहाँ एक सशुल्क संस्करण पनि छ। मनपर्दो सदस्यता एक महिनाको लागि करीव $ is० हो, months months महिनाको लागि $,, वा months महिनाको लागि $ and ० र तपाईंलाई असीमित लिंकहरू पठाउन र कडा फिल्टरहरू सेट गर्न अनुमति दिन्छ।
हामी किन यो छनौट गर्दछौं : हामीले खेल छनौट गर्‍यौं किनभने यो विवाह सम्बन्धी गम्भीर डेटर्सका लागि उत्तम विकल्प हो।
सदस्यहरू गम्भीरताका साथ सम्बन्ध वा विवाह खोजिरहेका छन्
प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्भावित खेलहरूका बारे विस्तृत जानकारी दिन्छ
नि: शुल्क विकल्पले प्रयोगकर्ताहरूलाई केवल पूर्वावलोकन दिन्छ, मेलहरू वा सन्देशहरू पहुँच गर्न कुनै तरिका बिना
किनभने यो तपाईंले भुक्तानी गर्नुभएको अनुप्रयोग हो, प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई अधिक गम्भीर रूपमा लिन्छन्
तपाईले मात्र कुराकानी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ रोजाईहरू मिलान तपाईंलाई प्रस्तुत गर्नेसँग
खेल एक कारणको लागि पुरानो स्ट्यान्डबाई हो। किनभने प्रयोगकर्ताहरूले सदस्यताका लागि तिर्नै पर्छ, यसको मतलब यो हो कि सामिल हुने मानिसहरू प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छन्। म्याच.कटको स्थापना १ 199 199 in मा स्यान फ्रान्सिस्कोमा गैरी क्रेमेन र पेन्ग टी। ओ O्गले गरेका थिए। त्यसबेलादेखि यो लोकप्रिय भइरहेको छ, विशेष गरी गम्भीर सम्बन्धको खोजीमा रहेका मानिसहरूलाई।
जब तपाई साइन अप गर्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो नाम, उमेर, उचाई, तपाई बच्चाहरु चाहानुहुन्छ कि हुन्न, कती एकल हुनुहुन्छ, र यदि तपाई धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने तपाई प्रविष्ट गर्नुहुन्छ। तपाईं त्यसोभए प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् "कुन कुराले तपाईलाई सबैभन्दा खुशी बनाउँछ?" कन्सर्टहरू, कुकिंग, ब्लगिging, द्वि घातुमान हेर्ने कार्यक्रम, खेलकुद, र अधिक सहित गतिविधिहरू छनौट गर्दै। अर्को, तपाईले पार्टनरमा के खोजिरहनु भएको छ चयन गर्नुहोस्, आयु दायरा, उचाई दायरा, धर्म, र ती विषयहरू "हुनुपर्दछ" छ वा छैन सहित।
नि: शुल्क विकल्पको साथ, सदस्यहरूले उनीहरूको सीमित सन्देशहरू प्राप्त गर्दछन् "शीर्ष पिक" जुन मिलानले उनीहरूको लागि उपयुक्ततामा छनौट गरेको छ। प्रीमियम विकल्पले सदस्यहरूलाई असीमित मेसेजिंग, मनपर्दो, तपाईंलाई मनपर्ने सबैलाई हेर्ने क्षमता र तपाईंको प्रोफाइल अवलोकन गर्ने क्षमता, डेटि expert विशेषज्ञसँग एक-बाट-एक वार्तालाप, र अधिक अनुमति दिन्छ।
दुर्भाग्यवस, यदि तपाईं म्याच प्रयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ; अन्यथा, तपाईं कसले तपाईंलाई सन्देश पठाइरहेको छ वा के भनिरहेछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्न। सदस्यता लागत एक वार्षिक योजना को लागी $ १ monthly मासिक, लगभग six २२ छ महिना को लागी मासिक, र months 30 को लागी months three महीना को लागी।
हामी किन यो छनौट गर्‍यौं: राया प्रसिद्ध र डेटि app अनुप्रयोगहरू हुन् जुन प्रसिद्ध व्यक्ति र प्रभावकारहरूबाट प्रायः आउँदछ।
सदस्य आदर र रोचक छन्
अनुप्रयोगको exclusivity यो अधिक रमाईलो र आकर्षक बनाउँछ
सेलिब्रेटी डेटिs प्रोफाइलहरू हेर्नको लागि उत्साहजनक
यदि उनीहरू आफ्नो दैनिक सीमामा पुग्छन् भने सदस्यहरूले बढी दैनिक मनपरीहरूलाई भुक्तान गर्नै पर्दछ
केवल iPhones मा काम गर्दछ
राया सब भन्दा विशेष डेटि apps अनुप्रयोग मध्ये एकको लागि प्रसिद्ध छ, ए-लिस्टरहरू र प्रभावकर्ताहरूको सदस्यको रूपमा लिनुहोस्। किनकि यो आमन्त्रित मात्र हो, त्यहाँ एक आवेदन प्रक्रिया छ, र व्यक्तिले सदस्य बन्न भुक्तान गर्नुपर्दछ, त्यहाँ एक विशिष्ट अनुप्रयोग भन्दा उच्च गुणवत्ताको अपील छ।
राया लगभग $ monthly मासिक हो र तपाई संसारभरका व्यक्तिहरू मार्फत स्वाइप गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं आफ्नो दैनिक लाइकहरूमा पुग्नुभयो भने, तपाईं करीव $० अधिक daily० दैनिक दैनिक लाइकको लागि तिर्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईं केवल तपाईंको हालको जडानहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ, जुन अनुप्रयोगले तपाईंलाई आग्रह गर्दछ। एकचोटि तपाईं सदस्य भएपछि, तपाईं साथीहरूलाई साथी पास दिन सक्नुहुनेछ जुन तिनीहरूको प्रवेशमा चाँडो मद्दत गर्न सक्दछ, यद्यपि अनुप्रयोगले अनुप्रयोगहरू अस्वीकार गर्ने अधिकार राख्दछ।
सदस्यहरू सबै विश्वभरि अवस्थित छन् र रचनात्मक क्षेत्रमा काम गर्न रुचाउँछन्। यो डेटि forको लागि मूल रूपमा सोहो हाउस हो। तपाईं आफ्नो इन्स्टाग्राम खाता जडान गर्न, गीत छान्न, फोटोहरूको स्लाइड शो बनाउन, र रोमान्टिक जडान वा साथीहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। अनुप्रयोगमा नजिकै को छ भनेर हेर्न तपाई स्थानबाट पनि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। रयाले तपाईंलाई देखाउँदछ कि तपाईं कुन साथीहरूसँग साझा हुनुहुन्छ यदि दुबै एक आपसी मित्रको फोन नम्बर छ, ताकि तपाईं आफ्नो साथीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ यदि तिनीहरूले तपाईंको सम्भावित मितिको लागि आश्वासन दिन्छ भने। तपाईं एक निश्चित शहर वा एक विशिष्ट उद्योगमा सदस्यहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई नेटवर्क बनाउन वा व्यक्तिलाई भेट्न पनि सजिलो बनाउँदछ।
हामी किन यो छनौट गर्दछौं: बम्बलको एउटा अनुपम अवधारणा छ: महिलालाई पहिले पुरुष सन्देश पठाउँछन् र त्यसपछि उनीहरूलाई प्रतिक्रिया दिन २ 24 घण्टा दिइन्छ, यसले महिला चालित अनुप्रयोग बनाउँछ।
एकै पटक धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहन सजिलो
महिलाले पहिले सन्देश पठाउँछन् कि तिनीहरूले विषय छनौट गर्न सक्दछन्
स्थान-आधारित ताकि तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ तपाईंको नजिक को छ यदि तपाईं छुट्टीमा वा नयाँ शहरमा हुनुहुन्छ भने
पुरुषहरूले सजिलै असहज तरिकामा प्रतिक्रिया दिन सक्दछन् र त्यहाँ अझै सतावटहरू छन्
धेरै पुरुषहरू उनीहरूको बारेमा धेरै जानकारीहरू सूचीबद्ध गर्दैनन्
तपाईसँग ओपनर प्रयोग गर्न सीमित समय छ, त्यसैले तपाईले बारम्बार अनुप्रयोग जाँच गर्नुपर्नेछ
२०१ 2014 मा जब बम्बल महिला संस्थापक ह्विटनी वोल्फेले सुरु गरेका थिए, यो महिलाले पहिले सन्देश पठाउने विचारमा आधारित थियो, यसको अर्थ उनीहरूले कुराकानीको सुरूवात छान्न सक्थे र कथालाई नियन्त्रण गर्न सक्थे। वोल्फले फोर्ब्स Under० अन्डर list० सूची र समय १०० सूची बनाए र केवल company१ मा कम्पनी सार्वजनिक गर्ने सबैभन्दा कान्छी महिला भइन्।
बम्बल प्रयोग एकदम सरल छ। तपाईंको तस्वीरहरू र तपाईंको बारेमा जानकारीको साथ प्रोफाइल बनाउनुहोस्, र त्यसपछि तपाईं या त नि: शुल्क योजना बनाउन सक्नुहुन्छ वा अन्य विकल्पहरूको लागि भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। "स्पटलाइट" योजनाले १० गुणा बढी म्याचहरू प्रति वचन दिन्छ र 30० मिनेटको लागि तपाइँलाई लाइनको अगाडि राख्दछ त्यसैले तपाइँको सम्भावित मिलानहरूले तपाइँलाई पहिले देख्न सक्छ। तपाईं spot० स्पटलाइटका लागि लगभग $ १, वा एकल स्पटलाइटको लागि लगभग $ pay तिर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईं लगभग $ 50 को लागी about० स्पटलाइटहरू पाउन सक्नुहुन्छ।
अर्को विकल्प सुपरस्वाईप हो, जसले भन्छ कि तपाईले "१०० भन्दा बढी कुराकानीहरू" पाउनुहुनेछ। सुपरस्वाइपले तपाईंलाई कसैको जस्तो सुपर बनाउन अनुमति दिन्छ, त्यसैले जब उनीहरूले स्वाइप गर्न सुरू गर्दछन्, तपाईं आफूले देख्ने पहिलो व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुहुनेछ। यो Super० सुपरस्वाईपहरूको लागि लगभग $ १ र दुई सुपरस्वाईपहरूको लागि प्रत्येक each $ छ। यदि तपाईंलाई यी दुई विकल्पहरूको लागि भुक्तानी गर्ने मन छैन भने, तपाईं आफ्नो खाताहरू एकै पटकमा सबै सुविधाहरू अनलक गर्न प्रीमियममा स्तरवृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रीमियम प्रयोगकर्ताहरू लगभग $ १ for को लागि अपग्रेड गर्दछ र त्यसपछि असीमित लाइकहरू, उन्नत फिल्टरहरू, ट्राभल मोडहरू प्राप्त गर्दछन् कि निश्चित स्थानहरूमा कसले स्वाइप गरिरहेको छ, र असीमित ब्याकट्र्याक्स यदि तपाईं कसैमा गलत तरिकाले स्वाइप गर्नुहुन्छ भने, अन्य धेरै सुविधाहरूको बीचमा।
बम्बल एक राम्रो विकल्प हो जसले सुरुवातबाट सुरू गर्दछ जो वरिपरि सबै योग्य व्यक्तिहरू हेर्न चाहन्छ। तपाईसँग मानिससँग मिलाउन दायाँ स्वाइप गर्नुपर्दछ, र त्यसपछि तपाईसँग पहिलो चाल र कुराकानी सुरू गर्न २ 24 घण्टा हुन्छ, त्यसैले तपाईले बारम्बार अनुप्रयोग जाँच गर्नुपर्नेछ, वा अन्य खेलहरू समयावधि सकिनेछ। पुरुषहरू त्यसपछि प्रतिक्रिया दिन 24 घण्टा छ। तपाईं फिल्टरको साथ अनुप्रयोग खोजी गर्न सक्नुहुनेछ, कसलाई मन पराउनु हुन्छ (पुरुष, महिला, वा सबै), उमेर दायरा, र दूरी। तपाईं उन्नत फिल्टरहरू पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ, एक विशिष्ट उचाइ, ज्योतिष चिन्ह, शैक्षिक पृष्ठभूमि, र अधिकको खोजीमा।
LGBTQ डेटि forका लागि उत्तम: HER
हामी किन यो छनौट गर्‍यौं : हामीले उनको छनौट गर्‍यौं किनकि यो LGBTQ महिलाहरूको लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो नि: शुल्क डेटि app अनुप्रयोग हो।
उनको समलि .्गी र कवच महिलाका लागि सबैभन्दा ठूलो नि: शुल्क डेटि app अनुप्रयोग हो
अनुप्रयोगले LGBTQ + समाचार र स्थानीय घटनाहरू लिदै, सुरक्षित स्थानहरू प्रदान गर्दछ
व्यक्तिहरूको गुनासो छ कि केहि जोडीहरू अनुप्रयोगमा थ्रीब्स खोजिरहेका छन्
यदि तपाईंले भुक्तानी गर्नुभएन भने, तपाईंले थप स्वाइपको लागि घण्टा कुर्नु पर्नेछ
एचईआर विश्वका सबैभन्दा ठूला नि: शुल्क डेटि app अनुप्रयोग हुन् जो कि्यर महिलाहरूका लागि मिलाउन सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ, साथै सुरक्षित ठाउँमा स्थानीय भेटघाटमा समाचार प्रदान गर्दछ। अनुप्रयोग समुदायको रूपमा काम गर्दछ र स्वागत र सहयोगी हुन कोशिस गर्दछ।
धेरै टिन्डर जस्तै, उनको सबै स्वाइपको बारेमा हो। एक स्वाइप बायाँको मतलब तपाई व्यक्तिमा रुचि राख्नु हुन्न, जबकि स्वाइप दायाँ (वा इमोजी मुटु) भनेको यसको मतलब तपाई व्यक्तिलाई जान्न चाहानुहुन्छ। त्यसो भए त्यो व्यक्ति निर्णय गर्न सक्दछ कि भावना आपसी हो कि होइन र तपाईंलाई सन्देश पठाउँदछ।
यो नि: शुल्क हो, त्यहाँ तीन प्रकारका प्रीमियम सदस्यता सदस्यताहरू छन्। एक प्रीमियम, एक महिना सदस्यता करीव $ १ at मा सुरू हुन्छ, छ महिनाको लागि यो $ 60 को आसपास हो र एक वर्षको लागि यो लगभग $ 90 हो।
किन हामीले यो छनौट गर्‍यौं: यहूदी मानिसहरूलाई स्वाइप गर्न र भेट्नका लागि जेस्वाईप एक उत्तम विकल्प हो, उनीहरू जहाँसुकै भए पनि फरक पर्दैन।
यहूदी एकल सजिलैसँग भेट्ने क्षमता
अनुप्रयोगको लेआउटले मान्छे कहाँ आधारित वा स्वाइप गरीरहेको छ भनेर हेर्न गाह्रो बनाउँदछ
JSwipe एक उत्तम विकल्प हो यदि तपाईं यहूदी हुनुहुन्छ वा यहूदी पुरुष वा महिला मिति दिन चाहनुहुन्छ भने। २०१ founder मा संस्थापक डेभिड यारसद्वारा निस्तार चाडमा सुरू गरिएको थियो, जसले त्यस समयमा बर्थराइट इजरायल र हिलेलका लागि पनि काम गरेका थिए, ब्रूक्लिनमा आधारित अनुप्रयोग पछि यसका प्रतिस्पर्धी, जेडेटेले अधिग्रहण गर्यो।
JSwipe मा, तपाइँ छोटो बायो, तपाइँको शिक्षा, र तपाइँको उमेर प्रविष्ट गर्नुहुन्छ। तपाईंलाई कोशर र तपाईंको संप्रदाय राख्नुहोस् कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईंलाई भर्न भनियो। त्यसो भए तपाई स्वाइप गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको प्रोफाईल पृष्ठ तपाईंको फेसबुक पेजको साथ लिंक गर्दछ, त्यसैले यसले तपाईंलाई पछिल्लो फेसबुकमा मनपर्ने कुराको आधारमा मेल खानेसँग कुन रुचिहरू साझा गर्छौं देखाउँदछ।
JSwipe एक निःशुल्क संस्करण, साथै एक प्रथम श्रेणी सदस्यता प्रदान गर्दछ, जहाँ तपाईं विशेष कार्यक्रमहरूमा जान सक्नुहुनेछ र नि: शुल्क पेय पदार्थ र मर्च जस्तो भत्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष संस्करणले तपाईंलाई यो हेर्न पनि अनुमति दिन्छ कि कसले तपाईंको प्रोफाईल मनपराउँदछ, तपाईंको प्रोफाइल बढि मेल खानेहरूका लागि स्वाइप गर्नुहोस्
एक महिनाको सदस्यता करिब $ २$, तीन महिनाको लागत $ $$ $, र six महिनाको सदस्यता करीव $ .० हो। धेरै जसो टिन्डरले, यसले तपाईलाई देखाउँदछ कि कसले तपाईको वरिपरि स्वाइप गरीरहेको छ स्थानको आधारमा, तर तपाईले माईल त्रिज्या पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ र विश्वभर एकल हेर्नुहोस्।
हामी किन यो छनौट गर्दछौं: तपाईं मूल डेटि app अनुप्रयोग, टिन्डरलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न, जसले स्वाइप फैलायो। यो हुक अप वा लामो-अवधि डेटि forको लागि आदर्श हो।
अनलाइन डेटि ofको दुनियामा तपाईंको औंला डुबाउनका लागि उत्तम
नेभिगेट गर्न सजिलो, विशेष गरी डेटि app अनुप्रयोग शुरुवातहरूको लागि
सबैभन्दा अनौपचारिक विकल्पहरूमध्ये एकले हुक-अपहरूतिर बढायो
स्वाइप गर्दा तपाईंले सामना गर्ने अन्तहीन विकल्पहरूलाई जोड दिन्छ
टिन्डर वास्तवमै अनुप्रयोग हो जुन यो सबै सुरु भयो। यसले २०१२ मा सुरू गर्‍यो र वास्तवमै डेटि scene दृश्यलाई सँधै परिवर्तन गर्‍यो, एकल सम्भावित बेडफेलोज वा गम्भीर महत्वपूर्ण अन्यहरूसँग मिल्दो बायाँ वा दायाँ स्वाइप गर्न को लागी एकल परिचय गर्दै।
र त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू थिए जुन सबै बिभिन्न चीजहरूको लागि खोजी गर्दै थिए, अब यो क्याजुअल डेटि towardsको लागि धेरै बढि तयार छ। टिन्डर एउटा सानो शहरमा उत्तम हो जहाँ त्यहाँ धेरै आलाका अनुप्रयोगहरू धेरै व्यक्तिहरू छैनन् तर निश्चित रूपमा थाहा छ कि व्यक्तिहरू अधिक अनौपचारिक प्रबन्धहरूको लागि खोजिरहेका छन्।
यो पूर्ण रूपमा नि: शुल्क अनुप्रयोगको रूपमा सुरू भएपछि, त्यहाँ एक नि: शुल्क र भुक्तानी गरिएको प्रीमियम विकल्प छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई "सुपर जस्तो" मानिसहरूलाई अनुमति दिन्छ (चापलुसीको एक अतिरिक्त रूप जसले कम्तिमा तपाइँको सम्भावनाको अवसरलाई तिगुनी बनाउँदछ) को लागी पासपोर्ट सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्। त्यहाँ अन्य स्थानहरूमा, र हेर्नुहोस् तपाईंलाई कसले मनपरायो तपाईंले तिनीहरूको माथि स्वाइप गर्नु अघि। टिन्डर गोल्डले प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यो सबै र बढि महिनाको १$ डलरको लागि दिन्छ, जबकि टिन्डर प्लेटिनमले ती विकल्पहरूको साथसाथै someone महिनाको मासिक matching १० मासिक मिलान गर्नु अघि कसैलाई सन्देश पठाउन क्षमता दिन्छ।
डेटि app अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नु ठूलो प्रतिबद्धता जस्तो देखिन्छ र थोरै जबरजस्ती महसुस गर्न सक्दछ यदि यदि तपाईलाई पहिले के गर्न को लागी पक्का हुनुहुन्न, किनकि ती सबैमा अत्यन्तै फरक कम्पन छ। यदि तपाईं अनुप्रयोग डेटि aboutको बारेमा अलि बढी गम्भीरताका लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने हिज उत्तम विकल्प हो। यसले तपाईंलाई सम्भावित मितिहरूको बारेमा बढि जानकारी दिन्छ र अधिक अर्थपूर्ण कुराकानीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ। राया आदर्श छ यदि तपाईं एक सेलिब्रिटी भेट्ने आशा गर्दै हुनुहुन्छ वा अन्य समान विचारधाराको रचनात्मक नेटवर्कको साथ नेटवर्क चाहानुहुन्छ, तर यसलाई निम्त्याउन गाह्रो हुन सक्छ।
यदि तपाईं पहिलो मिति को एक धेरै मा जाने आशा गर्दै Bumble महान छ। अनुप्रयोगले तपाईको व्यक्तिको बारेमा धेरै बताउँदैन, तर यसले अन्तहीन स्वाइप गर्न र च्याट गर्न सुरु गर्दछ। सोच्नुहोस् कि यो अनौंठो बारमा कसैलाई भेट्नु जस्तै। यदि तपाईं मिति महिलाहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ र यसको लागि विशेष रूपमा अनुप्रयोग चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको उत्तम शर्त हो। र यदि तपाईं यसलाई आकस्मिक राख्न चाहनुहुन्छ भने, टिन्डर एक कारणको लागि पुरानो वफादार हो।
कसरी डेटिंग अनुप्रयोगहरू काम गर्छन्?
केहि अनुप्रयोगहरूलाई दुबै पक्षहरूलाई स्वाइप गर्न आवश्यक छ यदि उनीहरू इच्छुक छन् भने र त्यसपछि तपाईंलाई जडान गर्न अनुमति दिनुहोस्। अरूले एक व्यक्तिलाई सन्देश पठाउन अनुमति दिन्छ, र त्यसपछि ती प्राप्तकर्ताले निर्णय गर्न सक्दछन् कि उनीहरू प्रतिक्रिया दिन चाहन्छन् वा गर्दैनन्। केही अनुप्रयोगहरूले व्यापक जानकारी दिन्छ, कलेज, उचाई, र पनि मानिसहरू बच्चाहरू चाहान्छन् कि गर्दैनन् सहित, जबकि अन्यले तपाईंलाई नजिक जानकारीको धेरै बिना नै सम्भावित पार्टनरहरू देखाउँदछ।
के त्यहाँ डेटिंग अनुप्रयोगहरूको लागि निःशुल्क र सशुल्क विकल्पहरू छन्?
धेरै जसो डेटि apps अनुप्रयोगहरू नि: शुल्क छन्, वा कमसेकम एक नि: शुल्क विकल्पको साथ साथै प्रीमियम, भुक्तानी विकल्प पनि छ। नि: शुल्क विकल्पले सामान्यतया मानिसहरूलाई स्वाइप गर्ने अवसर दिन्छ, जबकि भुक्तानीले मानिसहरूलाई अझ विशेष हुन दिन्छ, फिल्टर स्थापना गर्ने जसले केवल एक निश्चित उचाई, धर्म, वा राजनीतिक सम्बन्ध मात्र देखाउँदछ, उदाहरणका लागि। धेरै अनुप्रयोगहरूको लागि, तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न अत्यन्त सजिलो छ र त्यसपछि नि: शुल्क संस्करण प्रयोग गर्नुहोस् जबसम्म तपाईं सुपर विशेष केहि खोज्दै हुनुहुन्न। केहि अनुप्रयोगहरू, रया जस्तै, सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई सानो मासिक शुल्क तिर्न आवश्यक छ। सामान्यतया, शुल्क कम छ यदि तपाईं केहि महिना वा बढी खर्च गर्नुभयो भने।
डेटि Apps अनुप्रयोगहरूको लागत कति छ?
डेटि free अनुप्रयोगहरू नि: शुल्कदेखि $ १०० सम्म दायरा हुन्छन् यदि तपाईं प्रीमियम संस्करण पाउनुहुन्छ र यसका केही महिनाहरूमा लगानी गर्नुहुन्छ। कम से कम महँगो विकल्पले तपाइँलाई धेरै प्रिमियम प्रस्तावहरूको दायरा दिनेछ जसले तपाइँको प्रोफाइल अपग्रेड गर्दछ, या त तपाइँलाई सम्भावित खेलहरूका लागि स्पटलाइटमा राख्दछ वा तपाइँलाई पहिले नमिल्दो कसैलाई सन्देश पठाउन विकल्प प्रदान गर्दछ।
हामीले एप्सका बारे विशेषज्ञलाई सोध्यौं, समीक्षा पढ्नुहोस्, र हाम्रो आफ्नै अनुभवको बर्ष प्रयोग गर्नुभयो। हामीले अनुप्रयोगहरू पनि खोज्यौं जुन अरूको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन्छ, साथै लचकता पनि जब यो भुक्तान योजनाहरूको आउँदछ। हाम्रो लागि डेटि preferences प्राथमिकताहरूको विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न महत्त्वपूर्ण थियो, चाहे यो क्याजुअल हुकअपहरू हो, पहिलो मितिहरू, वा विवाहसमेत। समावेशीकरण पनि हाम्रो विकल्पहरू निर्धारण गर्न एक महत्वपूर्ण कारक थियो, त्यसैले विभिन्न यौन झुकाव र धर्महरूलाई पूरा गर्ने अनुप्रयोगहरूले सूची बनायो।